मोबाईल हरायो ? कहाँ छ भनेर यसरी पत्ता लगाउनुहोस - Samachar Pati : A Complete News Portal From PokharaSamachar Pati : A Complete News Portal From Pokhara
मोबाईल हरायो ? कहाँ छ भनेर यसरी पत्ता लगाउनुहोस
प्रकाशित मिति: 2074 भाद्र 10 शनिबार(August 26, 2017) 12:25 PM बजे Posted By: samacharpati
हराएको मोबाइल कहाँ छ भन्ने यसरी एक मिनेटमै आफैँ पत्ता लगाउनुहोस् । मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि थोरैबेर मात्रै आँखाबाट टाढा भयो भने पनि ठूलै समस्या झेल्नुपर्छ । मोबाइल कतिपय समयमा राखेको ठाउँ भूल्न सकिन्छ भने कतिपय समयमा हराउन पनि सक्छ ।
Android यदि तपाईंको मोबाइल फोन हरायो भने त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने तुरुन्तै आफैँ पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र तपाईंले त्यसलाई लक गरिदिन र त्यहाँ भएका डाटाहरु मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ । तरिका निकै सजिलो छ । यस्तो सुविधा तपाईंलाई गुगलले दिएको छ । यसरी गर्नुस्:
– सबैभन्दा अघि गुगलको होम पेज खोल्नुहोस् । त्यहाँ जिमेल आईडी लगइन गर्नुहोस्, जुन तपाईंको एण्ड्रोइड डिभाइस प्रयोग भएको मेल आइडी होस् । – त्यसपछि गुगल सर्च बक्समा गएर ‘Where’s my phone?’ सर्च गर्नुहोस् । जब तपाईंले यस्तो सर्च गर्नुहुन्छ, तत्कालै एउटा लोकेशन म्याप खुल्छ ।
Mobile Location यद्यपी आईफोन युजरले भने यो ट्रिकबाट फाइदा लिन सक्दैनन् । तपाई‌ंको फोन अनिवार्य एण्ड्रोइड हुनु जरुरी छ । iPhone का प्रयोगकर्ताले iCloud को मद्दतमा हराएको डिभाइस खोज्न सक्दछन् | –अनलाईन खबरवाट
अपराध अनुसन्धान गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग ‘हेलमेटमा